Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 3:59 AM2comments:
ဒဏ်ရာတွေ ရင်မှာနင့်လို့ ကဗျာရေးပါသည်…
ချစ်သူရဲ့ ခြေစုံကန်မှုကြောင့် ကဗျာရေးပါသည်…
သစ်ရွက်ကြွေသံကြောင့် … ရွက်သစ်ဝေသံကြောင့်
မိုးထစ်ချုန်းသံကြောင့် … မိုးတိတ်သွားသံကြောင့်
နှင်းပွင့်ဝေသံကြောင့် … နှင်းခက်ပျယ်သံကြောင့်
… … … … … … … … … … … … …. …. ...
♥ မိုးဇက်ဒီမွန်း ♥
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 10:26 AM3comments:
ငါ့ဘ၀ ဘာလို့ အကြိမ်ကြိမ်
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 11:52 PM 1 comment:
ကြယ်ကြွေတွေ ဇယ်တောက်တမ်း ကစားချင်လို့
ရင်ကြွေအောင် ရှိုက်ရှိုက်သည်းသည်း ငါ..ငိုခဲ့ဖူးတယ်.....
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 11:25 PM2comments:
ဟိုးးးးးး မှာ တွေ့လား
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 11:28 AM3comments:
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 11:07 AM No comments:
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 11:04 AM No comments:
သိင်္ဂီ....ငါ...ငိုတတ်ပြီ သိင်္ဂီ
ငါ...ငိုတတ်ပြီ သိင်္ဂီ.....
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 11:01 AM No comments:
နင် ရွာချခဲ့တာက အမုန်းတွေပါပဲ
အခမ်းအနားဆုံး ပွင့်စေဖို့ပေါ့……။ ။
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 1:07 PM2comments:
နင်ပြုံးရင် ငါပျော်ပါတယ် နတ်သမီးလေး
*နမ်မီးဆစ် = ကလဲ့စားချေတတ်သောနတ်သမီး
Posted by မိုးဇက်ဒီမွန်း at 6:02 AM 1 comment: